यो सामाग्री बिस्तारै र लगातार टिभी "सैमसंग" को "स्मार्ट टिभी" कन्फिगर गर्न कसरी वर्णन गर्दछ। मूलतः, एक अल्गोरिदम थप बहुमुखी र लागू श्रेणीमा कुनै पनि उपकरण देखाइएको छ।
लगातार उल्लेखित प्रदर्शन थप अपरेसन एक बहुमुखी मल्टिमिडिया उपकरण जस्तै सेट को प्रक्रिया गर्न गाह्रो छैन।
"स्मार्ट टिभी" के हो?
"सैमसंग" गर्न "स्मार्ट टिभी" कन्फिगर गर्ने बारे temkak कुरा अघि, छ कि र किन तथ्यलाई सामना गर्नेछ मिति यस्तो उपकरणहरू, त्यसैले मांग यो विकल्प। पुरानो टिभी समाधान मात्र प्राप्त या त एन्टिनाको, वा भिडियो प्लेयर, वा अन्य कुनै पनि यस्तै उपकरणबाट थियो जो एक छवि, प्रदर्शन गर्न सकेन। तर अब तिनीहरूले विशेष उपकरण बिना सकिनँ इन्टरनेट जडान र वेबसाइट डाउनलोड वा वैश्विक वेब चलचित्र प्ले। तसर्थ, यस drawback पहिले deprived थिए जो एक "स्मार्ट टिभी", संग टेलिभिजन रिसीभर को एक नयाँ पुस्ता। मूलतः यी समाधान बहुमुखी मल्टिमिडिया केन्द्र हो र वेब सर्फ मात्र होइन वा एउटा चलचित्र प्ले, र प्रदर्शन र कार्यहरु निगरानी गर्न सक्षम छन्। एक एकीकृत अपरेटिङ सिस्टम को उपस्थिति कार्यक्षमता को एक कम स्तर संग पूर्ण-fledged कम्प्युटर मा यस्तो टिभी रिसीभर बनाउँछ। सफ्टवेयरको लगातार सुधार अन्ततः व्यक्तिगत कम्प्युटर र यस्तो मल्टिमिडिया केन्द्र बीच लाइन मेटिनेछ भन्ने तथ्यलाई नेतृत्व हुनेछ।
को धुन "सैमसंग" गर्न "स्मार्ट टिभी" पहिला, यो सिस्टम सफ्टवेयर सामना गर्न आवश्यक छ। मिति, टीवी यो विकल्प तपाईंलाई यी सञ्चालन प्रणाली पूरा गर्न सक्छन्:
Tizen - कम्पनी "सैमसंग" को एक स्वामित्व विकास। यो कार्यक्षमता को हालको स्तर र समर्थित सफ्टवेयर को एक ठूलो सूची मा सबै भन्दा राम्रो को एक छ।
WebOS - एलजी को विकास छ। सार मा कार्यक्षमता र आवेदन सफ्टवेयर को सूचीमा दुवै छ जो "सैमसंग", पूर्ण एनालग सिस्टम सफ्टवेयर यसको प्रत्यक्ष प्रतियोगी गर्न कमसल छैन छ।
उपकरणहरू यस श्रृंखला मा पनि फेला ओएस "एन्ड्रोइड" गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा सामान्यतः ब्रान्डहरु "सोनी" र "फिलिप्स" द्वारा मनपरेको। यो मोबाइल उपकरणहरूको लागि सञ्चालन प्रणाली को एक खोसिएर नाङ्गै-डाउन संस्करण हो कि उल्लेख गर्नुपर्छ। यो छ कार्यक्षमता को स्तर अघिल्लो दुई सञ्चालन प्रणाली गर्न कमसल छैन।
यो वर्ग यसको हालैको टेलिभिजन उपकरणहरू को आपूर्ति को सूची, दक्षिण कोरियाली कम्पनी "सैमसंग" निम्न समावेश छ:
ताला लगाईएको बोल्ट संग कोस्टरस को सेट गर्नुहोस्।
ब्याट्री को एक पूरा सेट संग नियन्त्रण प्यानल।
ग्यारेन्टी पूर्ण सूची संग कार्ड।
द्रुत स्थापना निर्देशन।
प्याकेजमा हार्ड प्रतिलिपि मा एक अलग वस्तु रूपमा टिभी मेनु मा समावेश गरिएको छ कि कारण लागि पुस्तिका समावेश गर्दैन। के तपाईं "स्मार्ट टिभी" सेट अप त्यसैले पहिले "सैमसंग" टिभी, यो कडा मा आपूर्ति कागजात को विद्युतीय संस्करण बारी र विस्तार जाँच्न सिफारिस गरिएको छ गर्न।
त्यसैले, कसरी टिभी "सैमसंग" को "स्मार्ट टिभी" समायोजन गर्न? पहिलो चरणको - प्रदर्शन तार प्रयोग गरेर स्विच। यो चरण मा, जस्तै manipulations प्रदर्शन हुनुपर्छ:
बाकसबाट प्राप्त उपकरण निकाल्नुहोस्। पनि अन्तिम निकाल्ने देखि यसका सामग्रीहरू। एकै समयमा आवश्यक बक्समा मुद्रण छन् भनेर निर्देशन ध्यान। पछिल्लो को कार्यान्वयन यस चरण मा उपकरण गर्न सम्भव क्षति जोगिन हुनेछ।
त्यसपछि विशेष स्क्रू संग तय गर्दै जो अडान, माउन्ट। यो गर्दा, स्थापना मार्गदर्शन मा निहित सिफारिसहरू ध्यान।
ठाउँमा टिभी सेट गर्नुहोस्। यसको स्थिरता जाँच गर्नुहोस्।
टिभी हवाई इनपुट आउन सक्छ भन्ने केबल जडान:
केबल प्रदायक उपकरण।
उपग्रह उपकरण सेट।
प्लग देखि शक्ति तार टिभी-रिसीभर सकेट जडान गर्न, र अन्य पक्षमा - गर्न बिजुली ग्रिड।
केही अवस्थामा, तपाईं मुड जोडी आरजे-45 पोर्ट जडान गर्न आवश्यक हुन सक्छ। यो विश्वव्यापी वेब गर्न सम्भव जडान विकल्प मध्ये एक हो। , यो सिर्फ यी उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सबै भन्दा राम्रो छ एडप्टर - तर आज को रूपमा यस्तो निर्णय सार्वभौमिक वाइफाइ संग सुसज्जित छन्।
सेटअप प्रक्रिया दुवै अवस्थामा समान छ, तर कुनै अतिरिक्त तार निकै जडान प्रक्रिया सरल।
भाषा र क्षेत्र को विकल्प
इन्टरफेस भाषा को चयन र उपकरण क्षेत्र को स्थान - त्यसैले "सैमसंग" "स्मार्ट टिभी" आमा जिब्रो मा सजिलो, त्यसपछि अर्को चरण टिभी सेट कसरी अप गर्न। रूसी - TV मा पहिलो पालो पछि सही भाषा चयन गर्न जसमा सुरूवात इन्टरफेस विन्डो देखा। त्यसपछि "समाप्त" क्लिक गर्नुहोस्। यो क्षेत्र चयन गर्न दोस्रो फारम खुल्छ। यो देश चयन गर्न आवश्यक छ - रूस।
अब यो मामला मा "स्मार्ट टिभी" मा च्यानल सेट अप गर्न कसरी हेरौं। पहिलो हामी ट्युनर गर्न संकेत स्रोत निर्धारण गर्न आवश्यक छ। यो वर्ग को निर्णय को सबै भन्दा सार्वभौमिक र यी स्रोतबाट मूल संकेत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ:
एंटेना (- टी / टी2यो मामला मा एनालग प्रसारण र डिजिटल स्वरूप DVB रूपमा अवलोकन गर्न सकिन्छ)। डिजिटल प्रसारण डिकोड गर्न, केही अवस्थामा तपाईं एक अतिरिक्त मोड्युल डिक्रिप्सन आवश्यक पर्दछ।
केबल अपरेटर उपकरण। यस मामला मा, च्यानलहरू एनालग वा डिजिटल ढाँचामा प्रसारण गर्न सकिन्छ। उत्तरार्द्ध मामला मा, यो प्राप्त संकेत रूपान्तरण गर्न थप उपकरण आवश्यक हुन सक्छ।
उपग्रह उपकरण सेट। यस मामला मा, सबै कुरा मात्र डिजिटल गुणस्तरमा छ। संकेत स्वरूप - एमपीईजी-2 वा एमपीईजी-4।
कुनै पनि घटनामा खोज च्यानलहरू क्रम निम्न चरणमा समावेश:
टाढाको बटन (मा "गियर" चित्रित) "सेटिङ" मा बटन थिच्नुहोस्।
नेभिगेसन बटनको मद्दतले एउटा उप "सबै सेटिङ" र "ठीक" थिचेर यसलाई चयन छ।
नयाँ मेनु मा, खण्ड "च्यानलहरू" फेला पार्न र यसलाई मा जानुहोस्।
अर्को चरणमा हामी त्यही मेनु वस्तु संग स्वचालित च्यानल खोज को प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ।
अर्को हामी तीन पहिले उल्लेख स्रोतहरू को एक निर्दिष्ट गर्नुहोस्।
डिजिटल, एनालग वा तत्संबंधी संयोजन: कि पछि संकेत ढाँचा चयन गर्नुहोस्।
कि पछि, स्वचालित खोज प्रक्रिया चलाउन।
स्नातक मा फेला च्यानलहरू सूची बचत गर्नुहोस्।
च्यानल सूची सम्पादन
खोज प्रक्रिया को अन्त पछि "स्मार्ट टिभी", "सैमसंग" मा च्यानल सेट गर्न कसरी सामना गर्नेछ।
एउटै मेनुमा, "सबै सेटिङ" "च्यानलहरू" चयन गर्नुहोस्। अर्को, तपाईं एक उप "सर्ट च्यानलहरू" चयन गर्नुपर्छ। हामी यो जान र यो सूची सम्पादन यसको एकमात्र विवेकमा। साथै, यो सिर्फ मात्र यस्तो छोराछोरीको कार्टून वा संगीत भिडियो रूपमा मात्र केही सामग्री प्रसारण गर्ने च्यानल, हुनेछ फोल्डरहरू सिर्जना गर्न सम्भव छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण चरण - वैश्विक वेब "स्मार्ट टिभी", "सैमसंग" को जडान सेटअप। "इन्टरनेटमा कसरी स्थापित गर्ने?" - यो प्रश्न अक्सर untrained प्रयोगकर्ता हुन्छ छ। यस मामला मा, निम्नानुसार प्रक्रिया हो:
मेनुमा जानुहोस् "सबै सेटिङ।"
को "नेटवर्क" खण्ड चयन गर्नुहोस्।
सबै उपलब्ध जडानहरू लागि थप खोजीहरू।
आफ्नो घर नेटवर्क चयन गर्नुहोस्।
पासवर्ड लागि संकेत गर्दा, यो प्रविष्ट गर्नुहोस्।
"टिभी" गर्न "स्मार्ट टिभी" सेट गर्न कसरी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम - यन्त्र, पनि भनिन्छ विजेट को कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न मिनी-कार्यक्रम स्थापना गर्न छ। यस मामला मा, जस्तै manipulations प्रदर्शन हुनुपर्छ:
मुख्य टिभी मेनु प्रविष्ट गर्नुहोस् र "अनुप्रयोग स्टोर" सैमसंग "चयन (केही अवस्थामा यसलाई हुन सक्छ सैमसंग स्टोर)।
आवेदन सूची को उपस्थिति पछि, तपाईं के चाहनुहुन्छ चयन र स्थापना विन्डो यसलाई खोल्न। बटन क्लिक गर्नुहोस् "स्थापना"।
स्थापना प्रक्रिया को अन्त मा, बटन थिचेर मुख्य मेनुमा जानुहोस्। हामी मेनु आइटम मार्फत हेर्न र यो पहिले स्थापित कार्यक्रम फिट हुनेछ नयाँ वस्तु हुनुपर्छ।
यो यस्तो मल्टिमिडिया समाधान कन्फिगर लागि प्रक्रिया सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण हो।
उहाँले च्यानलहरू सेट गर्न कसरी भन्दा पनि अधिक महत्त्वपूर्ण थियो। पूर्ण-fledged मल्टिमिडिया केन्द्र र मनोरञ्जन मा खोल्दै को खर्च मा टिभी "सैमसंग स्मार्ट टिभी"।
पनि मल्टिमिडिया उपकरण तपाईं IPTV च्यानलहरू विशेष हार्डवेयर कन्सोल बिना हेर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्न, यी चरणहरू प्रदर्शन:
हामी यस्तो सेवाहरूको प्रावधान लागि केबल सेवा प्रदायक संग एक सम्झौता निष्कर्षमा पुग्न।
कि पछि, अनुसार यसको सिफारिसहरू संग, आवेदन स्थापना गर्न।
को स्थापना विजेट चलाउन र कार्यक्रम हेर्न।
माथिको सबै र "स्मार्ट टिभी" मा च्यानल सेट गर्न कसरी को प्रश्नको जवाफ हुनेछ। आज "सैमसंग" बाट टीवी एकदम लोकप्रिय छन्, त्यसैले हामी धेरै पाठकहरूलाई उपयोगी निर्देशन छ भन्ने आशा।
यो सामाग्री चरणमा टिभी "सैमसंग" को "स्मार्ट टिभी" कन्फिगर गर्न कसरी, यस्तो सञ्चालन वर्णन गरिएको छ। यसो माथि बाट देखेको रूपमा, मुश्किल केही छैन त्यहाँ छ। यो प्रक्रिया सेना सबैलाई।
के भने त्यहाँ तीन रंगीए कुनै संकेत हो?
आँखा खस्छ "Okoferon": प्रयोगको लागि निर्देशन। तयारी समीक्षा "Okoferon"
चाकू-कटर: वर्णन, प्रकारहरू, प्रकार्यहरू, तस्बिर। आफ्नो हातले कसरी चाकू बनाउने छ?
कसरी इन्टरनेटमा विज्ञापन सिर्जना गर्न: चरण पुस्तिका द्वारा चरण
मई मा सबै भन्दा राम्रो बिदा - स्लोभेनिया रिसोर्ट्स, फ्रान्स र इटाली।
पाइक लागि catchability lures
केई, चिकन र पनीर संग स्वादिष्ट सलाद